को रोना निको पार्ने खोप आविष्कार ! ::
को रोना निको पार्ने खोप आविष्कार !
काठमाडौँ ,२१ माघ– एक महिला वैज्ञानिक घा तक कोरोना भा इरस वि रुद्धको खोप आविष्कार गर्ने अनुसन्धानमा जुटनु भएको छ । स्कटल्याण्डकी वैज्ञानिक डा. केट ब्रोडरिक कोरोना भा इरसबाट बचाउन खोप आविष्कार गर्न कोसिस गरिरहेको एजेन्सीले जनाएको छ । अन्नपुर्ण पोष्टमा खवर छ ।
द टाइम्सको रिपोर्टअनुसार हिजोआज ब्रोडरिक दिनरात यही काममा व्यस्त हुन थल्नु भएको छ । उहाँ रातमा २ घन्टामात्र सुत्ने गर्नु भएको छ । ब्रोडरिक करिब २० वर्षदेखि खतरनाक रो ग वि रुद्धको खोप बनाउने काममा संलग्न हुँदै आउनु भएकोृ छ । यसअघि उहाँ इ बोला, जीका जस्ताभ यानक रो ग वि रुद्ध औषधि बनाउन सफल हुनु भएको थियो ।
अहिले उहाँ फेरि कोरोना भा इरसविरुद्धको खोप बनाउन लागिपर्नु भएको छ । उहाँले खोप तयार गरिसक्नु भएको छ । मुसा र सुँगुरमा खोपको परीक्षण भइसकेको छ । उहाँले भन्नु भयो,“आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा परिवर्तन ल्याउन काम गरिरहेकी छु र अहिले को रोना भा इरसबाट बच्न खोप बनाउँदैछु ।”
डा.ब्रोडरिक अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा काम गर्नु हुन्छ । अनुसन्धानका लागि उहाँको एउटा टोली छ । उहाँले भन्नु भयो, “रातमा २ घन्टा मात्र सुत्ने गरेका छौं ।” दुई सन्तानको आमा ब्रोडरिकले बिदा मनाइरहेका बेला चीनको वुहानमा को रोना भा इरस फैलिएको जानकारी पाउनु भएको थियो । चिनियाँ अधिकारीले को रोना भा इरसको आनुवंशिक कोड जारी गर्ने वित्तिकै उहाँले ३ घन्टाभित्र खोप तयार पारेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार खोप डिजाइन गरेको भोलिपल्ट तयारीका लागि कारखानामा पठाइएको थियो । डा.ब्रोडरिकको टोलीले बिल गेट्सद्वारा समर्थित संस्थाबाट रकम पनि पाएको थियो ।